२०७८ असोज ९ शनिबार ०६:५६:००
प्रविधिसम्बन्धी अधिकार बाल्य तथा किशोरावस्थाका व्यक्तिहरूका लागि पनि उत्तिकै लागू हुन्छ त ? के हामीले गर्ने प्रविधिसम्बन्धी अधिकारको कुरामा बाल्य तथा किशोरावस्थाका व्यक्तिहरूको अधिकारको पनि कुरा गर्दै छौ त ? डिजिटल अधिकारसम्बन्धी छलफल प्रायः जोखिम तथा खतरालाई केन्द्रमा राखेर भएको पाइन्छ । फलस्वरूप, यसमा भएका सकारात्मक र अवसरका कुरा छायामा पर्छन् । जबकि इन्टरनेटमा धेरै कुरा सिक्न, जान्न पाइन्छ । इन्टरनेट अवसर पनि हो । इन्टरनेटसम्बन्धी छलफल इन्टरनेटको सकारात्मक पाटोभन्दा हिंसा, डर, जोखिमताको दृष्टिकोणबाट बढी हुन्छ । यस्ता छलफलले अनावश्यक नियन्त्रण, सेन्सरसिप र बन्देजहरू सिर्जना हुन्छन् ।
अभिभावकले सन्तानलाई माया गर्ने नाममा इन्टरनेटको सकारात्मक पक्षबाट विमुख पार्न खोज्दै छन् । कतिपय सन्दर्भमा अर्थहीन डर बोकेर अभिभावकहरू भन्दै छन्, ‘मलाई मेरो बच्चा कहाँ–कहाँ जान्छ, को–कोसँग बोल्छ भन्ने कुराको जानकारी मेरो मोबाइलमा थाहा पाउने बनाउन मन छ ।’